प्रधानमन्त्री ओली डिस्चार्ज, स्वास्थ्यअवस्थाबारे जानकारी लुकाउने कोसिस, आजैदेखि काममा फर्किन सक्नुहुन्छ : अस्पताल – Health Post Nepal
प्रधानमन्त्री ओली डिस्चार्ज, स्वास्थ्यअवस्थाबारे जानकारी लुकाउने कोसिस, आजैदेखि काममा फर्किन सक्नुहुन्छ : अस्पताल
२०७६ कार्तिक १४ गते १९:०८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई दिनको उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । १२ वर्षअघि प्रत्यारोपित मिर्गौलामा आएको खराबीका कारण विविध स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि बुधबार बिहान धापासीस्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा भर्ना भएका प्रम ओलीलाई दुईपटकको हेमोडायलाइसिसपछि बिहीबार बेलुका डिस्चार्ज गरिएको हो । प्रम ओलीको रगतमा बढेको हानिकारक तत्त्व क्रियटाइन हटाउन बुधबार र बिहीबार गरी दुईपटकसम्म हेमोडायलाइसिस गरिएको छ ।
डिस्चार्जको निर्णयपश्चात् प्रमको स्वास्थ्यअवस्थाबारे जानकारी दिन बिहीबार साँझ अस्पतालमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा अस्पतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले अहिले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य ठिक रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य अहिले एकदमै ठिक छ, उपचारअघि पनि उहाँको स्वास्थ्य ठिक नै थियो,’ डा. पाण्डेले भने, ‘उहाँको रगतमा बढेको क्रियटाइनलाई क्लियर गर्न दुईपटक हेमोडायलाइसिस गरिएको छ ।’ बुधबार नै प्रधानमन्त्रीको पहिलो डायलाइसिस गरिए पनि अस्पतालले त्यसलाई लुकाउँदै आएको थियो ।
‘प्रधानमन्त्री आजै बेलुकादेखि काममा फर्कन सक्नुहुन्छ’
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यअवस्था सामान्य रहेको र डायलाइसिसपछि अझै राम्रो भएको दाबी अस्पतालले गरेको छ । उपचारमा संलग्न टोलीलाई नलिई एक्लै पत्रकारसम्मेलनमा उपस्थित भएका निर्देशक डा. पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यअवस्था उपचारपछि एकदमै राम्रो छ, उहाँलाई हाम्रो इन्स्टिच्युटले बेस्ट उपचार दिएको छ, उहाँमा आत्मबल दरो छ र निकै कम्फर्ट फिल गरिरहनुभएको छ ।’
निर्देशक पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको उपचारको नेतृत्व गरेकी प्रमकी निजी चिकित्सक तथा ग्रान्डीकी मिर्गौला विभाग प्रमुख प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहसहित आफू (मेडिकल डाइरेक्टर) समेतले हस्ताक्षर गरेको डिस्चार्ज लिखत पढेर सुनाए । प्रधानमन्त्रीको थप उपचारबारे भने डा. पाण्डेले पत्रकारको अनेक प्रयासका बाबजुद पनि केही खुलाउन चाहेनन् ।
निर्देशक डा. पाण्डेले प्रधानमन्त्री डिस्चार्ज भएलगत्तै कामकाजमा फर्कन सक्ने दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीले भोलिदेखि काम गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा निर्देशक डा. पाण्डेले भने, ‘मलाई लाग्छ, उहाँले आज बेलुका नै पनि मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ ।’
स्वास्थ्यपरीक्षणको रिपोर्ट, भावी उपचारलगायतबारे जानकारी लुकाउने कोसिस
अस्पतालले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी जनचासोका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू लुकाउने कोसिस गरेको छ । पत्रकारसम्मेलनमा निर्देशक डा. पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यपरीक्षणको रिपोर्ट, थप डायलाइसिस गर्नुपर्ने–नपर्ने, भावी उपचारलगायत विषयमा जवाफ दिन इन्कार गरेका छन् ।
पत्रकारले पटक–पटक उल्लेखित विषयमा जिज्ञासा राख्दा पनि निर्देशक पाण्डेले त्यसलाई अनेक बहानामा टारेका थिए । व्यक्तिको प्राइभेसीअन्तर्गत अस्पतालले सबै कुरा सार्वजनिक नगर्ने प्रतिक्रिया निर्देशक पाण्डेको थियो । प्रधानमन्त्रीजस्तो सार्वजनिक व्यक्तिको स्वास्थ्यअवस्थाका जानकारी जनताले पाउनुपर्ने होइन ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा निर्देशक पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्री पद सार्वजनिक भए पनि उहाँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हो, आफ््नो स्वास्थ्यबारे व्यक्तिको प्राइभेसीको अधिकारलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।’
पत्रकारको जिज्ञासा मूलतः प्रधानमन्त्री ओलीलाई नियमित डायलाइसिस गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा केन्द्रित थियो । यसमा निर्देशक डा. पाण्डे त्यसको निर्क्योल उपचारमा संलग्न प्रा.डा. शाह नेतृत्वको टोलीले गर्ने भन्दै पन्छिएका थिए । निर्देशक शाहको प्रस्तुतिमा झल्किएको विवशताबाट अस्पताललाई प्रमको स्वास्थ्यबारे भनिएभन्दा बढी सार्वजनिक नगर्न निर्देशन गरिएको स्पष्ट झल्किन्थ्यो ।
पत्रकारसम्मेलनमा आएनन् उपचार टोलीका सदस्य
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्यअवस्थाबारे जतिसुकै लुकाउने प्रयत्न गरे पनि करिब डेढ दशकदेखिको निरन्तरको अफोअपबाट उनको स्वास्थ्यअवस्थाको लगभग इतिवृत्तान्त थाहा पाएका पत्रकारको जिज्ञासासित आमने–सामने नहुन उपचार टोलीका कुनै पनि सदस्य पत्रकारसम्मेलनमा देखिएनन् । उपचारको नेतृत्व गरेकी डा. शाहले नै प्रमको उपचार र स्वास्थ्यअवस्थाबारे जानकारी दिने अनुमान लगाइए पनि अन्ततः निर्देशक डा. पाण्डे मात्र पत्रकारसामु उपपस्थित भएका थिए । नियमित डायलाइसिस तथा प्रत्यारोपणलगायत सवालमा निर्देशक पाण्डेलाई उपचार टोलीले निर्णय गर्छ भनेर पन्छिने सुविधाका लागि उनीहरू उपस्थित नभएको स्पष्ट अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो ।
प्रमको स्वास्थ्यअवस्था सामान्य अवस्थामा आएकोमा खुसीको सन्देश दिन नै पत्रकारसम्मेलन गरिएको निर्देशक पाण्डेको भनाइ थियो । प्रमको स्वास्थ्यबारे जनतालाई विस्तृतमा जान्नु आवश्यक नभएको जिकिर गर्दै उनले मात्र स्वास्थ्य सही रहेको सन्देश प्रवाहित गरिदिन सञ्चारकर्मीलाई अनुरोध गरेका थिए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीको क्रियटाइनको मात्रा पहिले यति थियो, डायलाइसिसपछि यति छ भनिदिनुको तपाईंहरू वा जनतालाई के अर्थ छ ?’ उनले पत्रकारलाई प्रतिप्रश्न गरे । जति नै उम्किने कोसिस गरे पनि डा. पाण्डेलाई पत्रकारको सवाल टार्न हम्मे–हम्मे परेको थियो ।
२ महिनाअघि मात्र सिंगापुरमा प्लाज्मा फेरेसिस गराएका प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यारोपित मिर्गौला पूर्णतः फेल नभइसकेकाले नियमित डायलाइसिस गर्न नपर्न सक्ने अनुमान पनि चिकित्सकमा जीवितै छ । यद्यपि, यसको निर्क्योल २–३ दिन मिर्गौलाको फंक्सन हेरेर मात्र गर्न सकिने बताइएको छ । त्यसैले उपचार टोली अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । तर, यदि फेरि पनि मिर्गौलाले आफैँ प्रपर फंक्सन नगरी रगतमा क्रियटाइनको मात्रा उस्तै बढेको खण्डमा नियमित डायलाइसिस वा पुनः प्रत्यारोपणको विकल्प रहँदैन । यस्तो भएमा या त प्रम ओलीले साताको कम्तीमा दुईपटक हेमोडायलाइसिस गराउनुपर्ने हुन्छ, या त पुनः प्रत्यारोपण । यसको अध्ययन तथा निर्क्योल उपचार टोलीले २–३ दिनभित्र गर्ने बताइएको छ । उमेरअवस्था जे भए पनि आत्मबल र शरीरका अन्य अंगको अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीमा पुनः प्रत्यारोपण पनि सम्भव रहेको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन् ।